सङ्खुवासभा ह’त्याका’ण्डका आरोपी पक्राउ, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
सङ्खुवासभा ह’त्याका’ण्डका आरोपी पक्राउ, को हुन् उनि ?
ठूला अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा सक्रिय सिआईबीलाई यो घटनामा पनि सफलता प्राप्त भएको हो । यसअघि बैतडीमा भएको भागरथी हत्या प्रकरण र बझाङमा भएको सम्झना विकको ह’त्या अनुसन्धानमा पनि सिआईबीले नै अनुसन्धान गरेको थियो । अभियुक्तलाई आइतबार चैनपुरमा सार्वजनिक गर्ने प्रहरीले तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ खोला गाउँमा भएको ह’त्या प्रकरणमा प्रहरीले ह’त्यारा चिनेजानेकै व्यक्ति भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीका अनुसार परिवारका एक सदस्यको ह’त्यापछि आफ्नो पहिचान खुल्ने डरले अरु सदस्यको पनि ह’त्या गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न व्यक्ति चिनजानकै भएका कारण कार्की परिवारका ५२ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीको ह’त्यापछि परिवारका अन्य प्रत्यक्षदर्शीको पनि ह’त्या भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको हो ।
घटनास्थलको सुक्ष्म अनुसन्धानपछि प्रहरीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । शव फेला परेको ‘लोकेसन’, शवको प्रकृतिलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राख्दै प्रहरीले ‘क्राइम सिन’ का आधारमा ‘एक जनाको मात्र ह’त्या गर्ने उद्देश्य भए पनि परिवारका अन्य सदस्यले देखेपछि पहिचान खुल्ने डरले ह’त्याराले ६ जनाकै ह’त्या गरेको हुनसक्ने’ निष्कर्ष निकालेको हो ।
घटनास्थलमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार घरभन्दा करिब २५० मिटर टाढा रहेको खोल्सीमा ५२ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीको शव भेटिएको छ । त्यसैगरी घरबाट खोल्सीतर्फ करिब १५० मिटरको दुरीमा तेजबहादुरकी श्रीमती कमला कार्की र बुहारी ३२ वर्षीय रञ्जना कार्कीको शव भेटिएको छ । त्यसैगरी घरभन्दा केही माथितिर रहेको खरबारीमा ८ वर्षीय विपिन कार्की र ५ वर्षीय गोमा कार्कीको शव भेटिएको छ ।
घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा उनीहरु सबैलाई लखेट्दै मारेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तेजबहादुरको ८४ वर्षीय आमा पार्वती कार्कीलाई भने घरमै कुँडो पकाइरहेको अवस्थामा त्यहीँ नै आक्रमण गरेको पाइएको छ ।
घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका प्रहरीका अनुसार ह’त्याराले सबैभन्दा पहिले तेजबहादुरलाई आक्रमण गरेको हुनसक्ने देखिएको छ । सो दिन बारीमा खेताला बोलाएकाले तेजबहादुर बिहानै घरबाट निस्किएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । तेजबहादुरको गोडामा बुट जुत्ता पनि भेटिएकाले उनी बिहानै कामका लागि निस्किएको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ । तेजबहादुरको शव भेटिएको स्थान घरबाट करिब २५० मिटर टाढा रहेको र त्यहाँबाट चिच्याउँदा घरका मानिसहरुले सुन्न सक्ने देखिन्छ ।